21.3. bu ubochi nke abu Uwa! Dee otu amaokwu - Zlowdaj.si
Ulo Echiche ndị ziri ezi 21.3. bu ubochi nke abu Uwa! Dee amaokwu
21.3. bu ubochi nke abu Uwa! Dee amaokwu
Jikọọ ụbọchị uri a ma jiri amaokwu sọpụrụ ya!
Abu ọ bụ ihe dị omimi ma dị ọcha nke na-esite n’obi na mkpụrụ obi nke mmadụ ọbụla. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị bụ onye edemede a ma ama ma ọ bụ naanị onye nwere mmasị ederede ederede. Ọ dị mkpa ka ị nụ ihe edere na obi gị ma nwee ike nke a na-esite n'ime mkpụrụ obi gị mgbe ị na-agụ ahịrị.
Ekele diri anyi niile
Ma ị na-agụ ma ọ bụ na-eke uri, ọ dị mkpa ka ị mara ya. Nsụgharị ha na-ebutekarị ozi siri ike n’ime ha. Ma eleghị anya, ọ bụ naanị ahịrị anọ, mana ọdịnaya zuru ezu maka otu akwụkwọ. Enweghị mkpa inye nsogbu na ụda, ma ọ bụ ịgbaso usoro ụfọdụ ndị nnukwu nna ukwu ji ederede ederede. Ihe niile dị mkpa bụ na ị na-akwụwa aka ọtọ na ederede gị. Ma onye maara, ma eleghị anya ọ bụ amaokwu gị na-emeghe ụzọ maka ngwọta nke nsogbu obi maka mmadụ, ma ọ bụ na ọ na-eme ka echiche dị mgbagwoju anya doo anya.
A post nke ZLOWDAJ.SI @ (@ zlowdaj.si) kekọrịta
21.3. anyị na-ede amaokwu maka ọdịmma nke ụwa gbara anyị gburugburu
Datebọchị a metụtara Pobọchị Powa Worldwa na ihe dị ka afọ ọ bụla, ọtụtụ ụlọ nri na-enye kọfị n'efu maka ndị ọdee niile dị njikere ide otu amaokwu ma hapụ ya ka ndị ọzọ gụọ. O di nwute, anyi hutara onwe anyi na oria ojoo, nke kachasi ike na aku na uba, karia ile obia na njem nleta.
Ma ekwela ka nke ahụ gbochie gị ịmepụta. Were nkeji ole na ole gaa onwe gị (ọ bụ ụbọchị Sọnde), mechie anya gị ma mụọ ezigbo ume …mịpụta… iku ume… ime ka echiche gị dị ọcha, chee echiche gbasara ndụ, ndị ị hụrụ n'anya, ịhụnanya, obiọma na okwu mara mma ịchọrọ ịgwa ndị mmadụ okwu na ụwa. Dee ihe dị gị n’obi. Jiri okwu kpọọ. Asụsụ Slovenia mara ezigbo mma, mara mma ma sie ike nke na ị ga-eme onwe gị na ndị ọzọ mma.
Zitere anyị ihe ndị ị kere eke!
You bu onye ode akwukwo n'obi, ka obu na obi adighi gi nma na ide akwukwo?
Maa nye anyị ya ziga na nhazi akwukwo na info@zlowdaj.si anyị ga-enwe obi ụtọ ịde ya na weebụsaịtị anyị na Facebook ka ndị ọzọ na-agụ ya na ndị enyi ha wee gụọ ya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ, jiri ezigbo aha gị bịanye aka na ya, ma ọ bụ họpụta aha ọzọ.
Anyị na-achọ ka onye ọ bụla bụrụ ụbọchị ụka mara mma ma bụrụ nke Sunday!
Pobọchị Powa Worldwa
Ekele dịrị ndị na-agụ akwụkwọ na ndị enyi gị!
Short nnyocha - Gịnị kasị obi gị obi?
Afọ ọhụụ na ekele dị mma na njedebe nke afọ
Ogbaji - Ọnwa Iri na Abụọ 26, 2018 0
Oge na-abịa oge ọ bụ oge ekele nke afọ ọhụụ na echiche mara mma na njedebe nke afọ. Mgbe anyị chere echiche nke ihe ọma niile na afọ ochie ma chọọ ibe anyị ...
Jiri ezi echiche maka ndụ dị mma!
Echiche ndị ziri ezi Ọnwa Itolu 10, 2019
Nye mụ onwe m, ha bụ amaokwu ịhụnanya kacha mma
Nsụgharị 18 Mee, 2017
Ekele na amaokwu maka ekeresimesi na afọ ọhụrụ 2020!
Daalụ Ọnwa Iri na Abụọ 5, 2019
Kedu otu esi ewepu ọnọdụ ọjọọ na ụbọchị mgbụsị akwụkwọ?
Mma na Ike Ọnwa Iri na Otu 8, 2020
Emume ncheta ọmụmụ
Ogbaji - Ọnwa Asaa 19, 2020 0